Ganacsade Salaadii Maqrib ee Caawa kaddib lagu dilay Dhinaca Waqooyi ee Magaalada Gaalkacyo |
Ganacsade Salaadii Maqrib ee Caawa kaddib lagu dilay Dhinaca Waqooyi ee Magaalada Gaalkacyo
Gaalkacyo (NN) 07/05/2016
Kooxo hubeysan ayaa salaaddii maqrib ee caawa kaddib ku dilay Waqooyiga Degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug Ganacsade caan ah, kaasoo ahaa Maareeyaha Shirkadda Isgaarsiinta SOMTEL ee Gobolka Mudug.
Ganacsadahan la toogtay oo lagu magacaabi jiray, Inj. Cumar C/lle [Cumar Dheere] iyadoo ay toogteen laba nin oo bastoolado ku hubeysan, xilli uu kasoo baxay masaajid uu salaaddii maqrib kusoo tukaday.
Dableyda dilka ganacsadaha geystay ayaa markiiba goobta ka baxsaday, iyadoo aysan jirin cid weli sheegatay mas’uuliyadda dilka Cumar dheere, waxaana dilkaan kaddib Waqooyiga Gaalkacyo ka billowday hawl-gallo ay sameynayaan ciidamada ammaanka Puntland.
Marxuumka toogashada lagu dilay ayaa ahaa Milkiilaha Shirkadda sameysa Joodariyada ee Raaxo, sidoo kale wuxuu saami ku lahaa Shirkadda Korontada siisa Xaafadaha Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee NETCO.
Sidoo kale, Cumar Dheere oo da’diisu u dhexeysay 60-jir illaa 70-jir, wuxuuna horay u soo noqday Guddoomiyaha Ganacsatada gobolka Mudug, haatanna wuxuu ahaa guddoomiyaha Guddi dhisamaha Waddada Wadaatin oo isku xiraysa degmooyinka Goldogob iyo Garacad ee gobolka Mudug.
Ugu dambeyn, Marxuum Cumar C/lle Dheere ayaa ahaa mas’uul ku hawlanaa Horumarinta degmada Gaalkacyo, isagoo horay dhaqaale u soo ururiyay Isbitaalka Gaalkacyo, markii ay ka baxday hay’adda MSF oo caawin jirtay, dhaqaalahaas oo dib loogu furay isbitaalka.